150W Ogwe Mpempe ụgbọala Na-ere Ahịa Ejiri Ìhè 19500LM China Manufacturer
Nkọwa:Ụgbọ mpempe ụgbọala na-ere ahịa weere ọkụ,Gburugburu n'èzí na-enwu ọkụ,Led Street Lamps
Home > Ngwaahịa > Okwunyere Ogwe Ndị Na-echekwa Ọdụm > Ejiri ụgbọala na-echekwa ọkụ ọkụ > 150W Ogwe Mpempe ụgbọala Na-ere Ahịa Ejiri Ìhè 19500LM
Ihe Nlereanya.: BB-LD-150W-S-DR1
Ụlọ ụgbọala adọba ụgbọala anyị na- ere ọkụ bia na nbudata nkedo na-eme ka eji daa n'osisi onu ogugu di iche iche na ndu ndu uzo di iche iche. nwere ike gbanwee ma ọ bụ ala site na ntanetị ma ọ bụ ebe a na-ahụ anya maka ntụziaka ziri ezi nke ọkụ ọkụ. Umu Ochie nke 150w Led Street iji elu-arụmọrụ Ikanam ibe nke nwere ike na-emepụta 19500 lumens nke ìhè mmepụta (na nke ahụ bụ ihe dị egwu 130 Lumens Per Watt), ma na-enye kacha lumens, ukwuu ebe mkpuchi maka gị n'èzí ọkụ needs.Our n'okporo ámá ada nwere ike iji dịka ọkụ ọkụ ọkụ, ọkụ ọkụ n'okporo ámá, ọkụ ụlọ ahịa na ebe obibi, ọkụ ọkụ n'okporo ụzọ, Egwuregwu Ụlọikpe egwuregwu ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ. Igwe ọkụ na - adọba ụgbọala 150w bụ ihe ngbanwe dị mma maka 400W mgbanaka ígwè na mgbatị ọkụ sodium. Nke a 150w na- eduzi na ìhè n'okporo ámá ìhè ụtụtụ nwere ike ịchekwa ego na ike oriri ruo 75% site na ịgbanwuo ike ọkụ ọkụ.
Ụgbọ mpempe ụgbọala na-ere ahịa weere ọkụ Gburugburu n'èzí na-enwu ọkụ Led Street Lamps Ụgbọ mpempe ụgbọala na-agbazi ọkụ Ụgbọ ala nke ụgbọala na-adọba ụgbọala Ụlọ ụlọ na-enwu ọkụ Ụlọ ahịa ụgbọala mpempe akwụkwọ Na-adọba ụgbọala na-adọba ụgbọala ọkụ